Antsiranana : “Zegny’zo”, “festival” miavaka | NewsMada
Antsiranana : “Zegny’zo”, “festival” miavaka
Mihamaro hatrany ny “festival” tontosaina eto amintsika, eto Antananarivo sy any amin’ny faritra, tato anatin’ny taona maromaro izay. Azo lazaina ho manana ny mampiavaka azy ny “Zegny’zo”, fanaon’ny kaompania Zolobe, any Antsiranana isan-taona. Tsy mba anaty efitrano ireo hetsika samihafa fa manatona ny vahoaka, eny an-dalambe rehetra eny mihitsy. Tsy vitsy ireo voasarika sy variana, avy hatrany.
Mandritra ny dimy andro, ny 10 hatramin’ny 14 mey izao, ny andiany fahafolo amin’ny “Festival Zegny’zo”. Hifamotoana, mandritra izany, ny mpandihy, mpihira, mpitendry zavamaneno, mpanao hosodoko ary indrindra ireo mpanao zavakanto eny an-dalambe, toy ny mpanao “cirques” sy mpitsambikina. Mandray anjara lehibe ao anatin’izany koa ny kaompania Zolobe, ivondronan’ireo mpanakanto avy amin’iny faritra iny.
Manodidina ny 15.000, isan-taona, ny olona tonga mankafy maimaimpona ny zavakanto atolotr’ireo tanora maro, manan-talenta. Ankoatra ny maha fialamboly azy, hetsika iray heverina fa mahasarika mpizahatany koa ny “Zegny’zo”, efa mitovitovy amin’irony diabe fanao any amin’ny tanàn-dehibe any ivelany any irony.